लिभिङ टुगेदरमा रहेकी प्रेमिकाको हत्या - अपराध - साप्ताहिक
लिभिङ टुगेदरमा रहेकी प्रेमिकाको हत्या
सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाएका प्रेमीबाट हत्या होला भनेर कसले कल्पना गरेको हुन्छ ? त्यो पनि वर्षौंदेखिको प्रेमसम्बन्ध र १० महिनादेखि लिभिङ टुगेदरमा बस्दै आएको प्रेमीबाट । यस्तै नसोचेको घटना बेहोरिन् खोटाङ ज्यामिरेकी ३५ वर्षीया सोनिया राईले ।
इटहरी उपमहानगरपालिका–४ माङहिङमा डेरा गरी बस्दै आएकी सोनियाको हत्या लिभिङ टुगेदरमा रहेका ३६ वर्षीय प्रेमी सोलुखुम्बुका लालबहादुर राईले गरेको बताइन्छ । उनले सोमबार साँझ धारिलो छुरा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले सोनियाको हत्याको आरोपमा लालबहादुरलाई सोही दिन डेराबाट २ किलोमिटर उत्तर पशुपतिचोकबाट पक्राउ गरेको हो ।
लालबहादुर रोजगारका क्रममा मलेसियामा रहँदैदेखि विवाहित सोनियासँग प्रेममा रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ‘लालबहादुर विदेशबाट फर्किएपछि वैशाखदेखि सोनियासँग इटहरीमा लिभिङ टुगेदरमा बस्न थालेको प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानबाट देखियो,’ इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रमुख डिएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले भने, ‘हत्या गर्ने योजना बनाएको पाइँदैन । लालबहादुरले सामान्य विवादमै आवेगमा आएर हत्या गरेको देखिन्छ ।’ सोनियाका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउदी अरेबियामा छन् ।
लालबहादुरले विदेश हुँदा सोनियालाई रकम समेत पठाइदिने गरेका थिए । उनीहरूबीच लेनदेनको विषयमा बेला–बेलामा विवाद हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘लालबहादुरले सोनियाको हत्या गरेको स्वीकार गरिसकेका छन् । बयानका क्रममा लालबहादुरले धारिलो छुराले हानेर हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन्,’ डीएसपी श्रेष्ठले साप्ताहिकलाई बताए ।
सोनियाको मृत्यु भएपछि लालबहादुरले हत्या गरेको चक्कु धोएर भान्सामा राखेका थिए । प्रहरीले घटनास्थलबाट उक्त चक्कुसमेत बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका लालबहादुरलाई प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्धामा जिल्ला अदालत सुनसरीबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । सँगै डेरा गरि बस्दै आएका लालबहादुर र सोनिया दुवै इटहरीमा मजदूरी गर्दै आएका थिए । सोनियाका १२ वर्षीया छोरी तथा ८ वर्षका छोरा छन् ।
यसरी गरे हत्या
सोमबार काम सकेर सोनिया र लालबहादुर डेरामा आए । फर्कंदा उनीहरूले रमाइलो गर्ने भन्दै मदिरा ल्याएका थिए । सोनियाले भान्सामा गएर चटपटे बनाइन् । चटपटेसँगै अरू परिकार पनि तयार भयो । भान्साको एक साइडमा उनीहरूले ‘लो–बेड’ राखेका छन्, त्यहीँ उनीहरू सँगै बसेर मदिरासँगै अरू परिकार पनि खाए । मदिराको नसा लाग्न थालेपछि लालबहादुर सोनियासँग झगडा गर्न थाले,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘लालबहादुर र सोनियाबीच विवाद बढ्दै गयो । मदिराको नसामा लठ्ठिएपछि लालबहादुरले भान्सामा रहेको चक्कुले सोनियाको छातीमा प्रहार गरे । सोनिया तत्कालै ढलिन् । सोनियाको प्राण गएपछि लालबहादुर त्यहाँबाट फरार भएका थिए ।’
प्रकाशित :फाल्गुन ४, २०७५
उठेन रहस्यको पर्दा रीनाको हत्या कि आत्महत्या
भाइले गरे दाजुको हत्या
युवतीको विषयमा साथीको हत्या
प्रेमी थरीथरीका सम्बन्ध थरीथरीका
निर्मला हत्या काण्ड : बम दिदी बहिनीकी आमा भन्छिन् मलाई न्याय चाहिएन ?
श्रेयाको हत्या गर्ने कुसुमलार्ई जीवित रहेसम्म कैद
मादक पदार्थ सेवन गराई सामूहिक बलात्कार चैत्र १८, २०७५
नेपाली भूमिमा अपराध गर्दै विदेशी चैत्र १४, २०७५